शब्दकोश: जमरे दसैँ, चिउरे दसैँ र विवश बुहारीहरू !
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, November 17, 2008
Dilip Acharya November 17, 2008
दशैंको आर्को पाटोलाई सहिढंगले दर्शाउनु भएको छ। पक्कै पनि कुनै पनि तडक-भडक र तामझामलाई कायम राख्‍न कुनै एक पक्ष भने पिल्सिन बाध्य भएकै हुन्छन।
सामाजिक परिवेशमा केहि परिवर्तनको आवश्यकता छ तर तपाईले नै भन्नु भएजस्तै दशैंको आकर्षण भने निरन्तर कायम छ र हुनु पनि पर्छ ।
Basanta Gautam November 18, 2008
साह्रै घतलाग्दो कुरा गर्नुभयो धाइबाजी दशैंको निहुँ पारेर। हामी परदेश बसेकाहरुको पिडालाई पनि सम्झिदिनुभएकोमा धन्यबाद!
दशैं तपाईँले भनेजस्तै एक अर्थमा 'मासु'को पर्यायवाची बनिसकेको छ। दशैं र अरु विशेष बेला बाहेकपनि नियमित मासु खाने मानिसहरुले दशैंको बेलामा नखाईदिए पनि पशुबलिको दशैं-केन्द्रीकरण अलि कम हुन्थ्यो होला। सबभन्दा राम्रो त शाकाहारीहरुको संख्या बढीदिए हुन्थ्यो। (आफैं शाकाहारी हुन नसक्नेले यसो नभने हुन्थ्यो होला!)
दशैं दशा हो भन्ने कुरा घरका महिला र विशेष गरी बुहारीमा विशेष लागू हुन्छ। उसैपनि कहिल्यै सिन्को नभाँच्ने लोग्नेमान्छेहरु दशैं-तिहारमा झन् 'राजा' बन्छन्। धेरैजसो बुहारीहरुको हकमा कठोर श्रम र आँसु बाहेक केहि हुन्न। हाम्रो समाजले त्यो आँसुको रिन कहिले चुक्ता गर्ला र 'बुहारी' हरुका लागि पनि दशैं आउला!